Basale bengenalutho kuqhuma ipayipi | News24
Basale bengenalutho kuqhuma ipayipi
ISITHOMBE:SITHUNYELWE Bekunjena ngesikathi kungena amanzi emzini wakwa Dladla eMbali Unit kumgwaqo uMpala.
USELE dengwane umndeni wakwaDladla waseMbali Unit 2 emva kokuba kuqhume ipayipi lamanzi elihamba ngaphansi kwendlu. ngoLwesithathu olwedlule.
Lesi sehlo senzeke ngoLwesithathu olwedlule ngezikhathi zasekuseni lapho amalunga alo mndeni ephaphamile ngoba ezwa kunokuqhuma obekwenzeka kuyona indlu ngaphakathi ngesikhathi usalele. Ipayipi liqhume lagcwalisa amanzi kuwona wonke amagumbi endlu nokudale ukuthi impahla esebenza ngogesi ife futhi ilimale ngenxa yokungenwa amanzi.
UNksz Mpume Dladla oyilungu lalo mndeni uthe kumanje bahlezi esihlotsheni lapho beqube khona ngoba bengenayo indawo yokuhlala emva kwalo monakalo. Uthe ipayipi liqhuma nje sekuneminyaka eminingi indaba yalo ibikwa kumasipala UMsunduzi. Lokhu kuqhuma bathe kungokwesithathu kwenzeka kodwa kungokokuqala kwenzeke endlini.
Uqhube wathi sekukaningi umasipala ubikelwa ngaleli payipi uthembise ukuthi uzoyibheka indaba yalo kodwa lutho njengoba sekugcine kwenzeke inhlekelele endlini.
“ Sivuswe ukuqhuma obekwenzeka egumbini lokuphumula ekuseni ngezikhathi zokugamanxa kehora lesikhombisa. Sonke sivukile sahlangabezwa amanzi ebephuma phansi eqhumise ama tiles. Siphuthumile sazama ukuvula iminyango ngoba omunye wawo ubusunenkinga ungavuleki. Size saphoqeleka ukuthi siwugqekeze umnyango ukuze uvuleke,” esho uDladla.
Uqhube wathi lokhu kuqhuma kuze kwangenelela emizini yomakhelwane nabo abagcine bephoqeleka ukuthi bakhiphe izimpahla zabo ngoba amanzi ayesedlulele emizini yabo.
“Kumanje sihlala esihlotsheni ngoba asinayo indawo lapho sizohlala khona. Sinikezwe itende nezingubo zokulala ilaba ababhekelela abezinhlekelele. Itende esinikwe lona asikwazi ukulisebenzisa ngoba kumanzi ngisho iyadi kanti futhi sisanokwesaba njengoba amanzi esaphuma epayipini elingemuva. Kulimale yonke impahla siyabonga ngoba akekho olimalile ngesikhathi kwenzeka le nhlekelele,” eqhuba uDladla.
Okhulumela umasipala UMsunduzi uNksz Nqobile Madonda uthe abezinhlekelele kanye noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nabo bebeyingxenye yokuyobheka isimo senhlekelele yomuzi wakwa Dladla. “ UMnyango obhekelela ezamanzi nawo uzobheka isimo isimo salo mndeni,” esho.
Lo mndeni uthe njengamanje usagqigqa ungena uphuma kamasipala uzama ukulungisa mayelana nalesi simo.
Bongani Bongo cant be trusted with classified information, says Saswu